नुन अनुहारमा लगाएर हेर्नुस सबै पिम्पलबाट छुटकरा पाउनु हुनेछ, कसरी लगाउने जान्नुहाेस् « गोर्खाली खबर डटकम
नुन अनुहारमा लगाएर हेर्नुस सबै पिम्पलबाट छुटकरा पाउनु हुनेछ, कसरी लगाउने जान्नुहाेस्
२०७७ साउन १२ गते सोमवार प्रकाशित
अनुहारमा पिम्पल आएर सुन्दरतालाई कायम राख्न सक्नु आजको आम मानिसको स्वास्थ्य चुनौतिको रुपमा आएको छ । बजारमा पिम्पल हटाउने अनेकौं क्रिम पनि आएका छन् तर त्यसले पनि काम नगर्दा चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अप्नाउनुहोस घरेलु उपाय :
त्यसपछि अनुहारलाई सफा पानीले पाखाल्नुहोस् र अनुहारलाई सुक्न दिनुहोस् । त्यसपछि नुन र महको मिश्रण अनुहारमा लगाउनुहोस् । फेरि हातलाई सफा पानीमा हल्का भिजाउनुहोस् ।
भिजेको हातले अनुहारमा सर्कुलर मोशनमा विस्तारै स्क्रबिङ गर्नुहोस् । कम्तिमा ५ मिनेट स्क्रबिङ गरेर अनुहारलाई नर्मल पानीले धुनुहोस् । एक हप्तामा कम्तिमा दुईपटक यस्तो गर्नुहोस् ।
अनुहारमा सानोतिनो पिम्पल आइहाल्यो भने हामी त्यसलाई निचोर्न थाल्छौं । जुन एकदम सरासर गलत कार्य हो । अनुहारमा पिम्पल आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई कहिल्यै पनि ननिचोर्नुहोस् । पिम्पल निचोर्नाले उसको छेउछाउमा पिम्पल हुनुको सम्भावना अझ बढने गर्छ । यदि हुन सक्छ भने तपाईले पिम्पललाई छुन पनि नछुनुहोस् । त्यो पिम्पललाई जति जिस्कायो, उति जिस्किन्छ र तपाईको अनुहारको सुन्दरता लाई कम गरिरहेको हुन्छ ।
अदुवा, वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार जिन्जीविरेसी परिवारमा पर्ने प्रमखु बिरुवा हो । यसको प्रयोग साधारणत तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा आउँछ । यसको गानो रेशादार हुन्छ ।
जति कम रेशा भयो अदुवा त्यति नै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा सल्यानको अदुवा त्यस अर्थमा उत्कृष्ट मानिन्छ । अदुवाले बिभिन्न प्रकारका रोग निको पार्छ ।
हामीले अदुवा सजिलोसंग नै बजारमा पाउन सक्छौ । पानी उमालेर अदुवाको सानो सानो टुक्रा त्यसमा हालेर खादा पनि हाम्रो घाटी दुखेको, छाती दुखेको निको हुन्छ ।
अदुवा हामी सबैको भान्सामा हुन्छ । यसलाई तरकारी पकाउदा मिलाएर खाने गरेको पाइन्छ । तर यसको खाने तरिका र नियमित सेवन गर्न सके यो जीवन बुटी समान हुनेछ ।
अदुवा हामी मसलाको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छौं । अदुवाले खानाको स्वाद बढाउन मद्धत गर्छ । अदुवालाई आयुर्वेदमा औषधि बनाउनको लागी प्रयोग गर्ने गर्छौं ।
अदुवालाई हामी घरेलु उपचारको लागी विभिन्न समस्याहरुले सताउँदा प्रयोग गर्न सक्छौँ । त्यसैले यो हाम्रो लागी निकै फाइदाजनक छ । अदुवालाई हामी काचैं पनि चपाउन सक्छौँ । यसलाई चियामा हालेर पनि चिया पिउन सकिन्छ ।
अदुवाको सेवनबाट हामीलाई पुग्ने फाइदहाहरु यस्ता छन्
यसले हाम्रो पाचन पक्रियालाई बलियो बनाउन मद्धत गर्छ । जसले गर्दा हामीलाई खाना पचाउन मद्धत पुग्छ ।
हरेक दिन अदुवा खाने गरेमा शरीरको अनावश्यक बोशो हट्छ । जसले गर्दा हाम्रो मोटोपना हराउँछ र हाम्रो तौल नियन्त्रित रुपमा रहन्छ ।
अदुवाको रस पिउनाले हाम्रो रगत सधैं सफा रहने गर्छ ।
अदुवा पानि पिउने गरेमा हाम्रो शरीरमा रहेको चिनीको मात्रा नियन्त्रित रुपमा रहने गर्छ । यसले गर्दा हामीलाई मधुमेह हुने सम्भावना निकै कम हुने गर्छ ।
अदुवाको सेवनले हामीलाई फोक्शो , कलेजो र छालाको क्यान्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
हरेक दिन अदुवा चपाउने गरेमा हामीलाई रुघाखोकी हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
अनुहारमा आउने पिम्पल्स र दाग हटाउन चाहानु हुन्छ भने हरेक दिन अदुवा खाने गर्नुहोस यसले तपाईलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
यसमा पाइने फोस्फोरसले हाम्रो दाँतलाई स्वास्थ्य राख्छ र गिजामा घाउ पनि आउन दिदैन ।
अदुवापानी नियमित सेवन गर्नुका फाइदा
१. डायबिटिज नियन्त्रण गर्छ
नियमित अदुवापानी पिउनाले शरिरको रगतमा सुगर लेभल नियन्त्रण हुन्छ । यसले डायबिटिज नियन्त्रण गर्छ ।
२. मांशपेशीको दुखाई कम गर्छ
अदुवा पानी पिउनाले शरिरमा रक्त सञ्चारमा सुधार आँउछ । यसले माशंपेशीमा आराम मिल्छ र माशंपेशीको दुखाई कम हुन्छ ।
३. टाउको दुख्न कम गर्छ
अदुवा पानी नियमित पिउनाले मस्तिष्कको कोषहरुमा आराम मिल्छ र टाउको दुख्न कम हुन्छ ।
४. छाला स्वस्थ बनाउँछ
नियमित अदुवापानी पिउनाले शरिरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । यसले रगत सफा हुन्छ र रगत र छालाको इन्फेक्सनको खतरा कम हुन्छ ।
५. प्रतिरक्षा बढ्छ
अदुवा पानी पिउनाले शरिरको रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ्छ । यसले रुघाखोकीको खतरा टर्छ ।
६. कफको समस्या हटाँउछ
अदुवापानीमा एन्टी ब्याक्टेरियल तत्व हुन्छ । यसको पानी पिउनाले खोकीको समस्या हट्छ ।
७. क्यान्सर बाट बचाँउछ
अदुवामा एन्टी क्यान्सर तत्व पाइन्छ । त्यसैले अदुवा पानी नियमित पिउनाले फोक्सो, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लगाएतका धेरै थरी क्यान्सरहरुबाट बचाँउछ ।
८. मुटु पोल्न कम गर्छ
खाना खाएको २० मिनेटपछि एक कप अदुवापानी पिउनुहोस् । यसले शरिरमा एसिडको मात्रा कन्ट्रोल गर्छ र मुटु पोल्ने समस्या कम हुन्छ ।
९. पाचनप्रणाली सुधार्छ
अदुवा पानीले शरिरमा पाचन गराउने जुसको मात्रा बढाँउछ । यसले खाना छिटो पचाउन सहयोग गर्छ ।
१०. तौल घटाउँछ
अदुवा पानी पिउनाले शरिरमा मेटाबोलिजम सुधार हुन्छ । यस्तोमा बोसो छिटो पग्लन्छ र तौल घटाउन सजिलो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अदुवा सेवनले हुनसक्छ हानि
१. कम तौल भएका व्यक्ति
यदि तपाईंको शरीरको तौल कम छ भने अदुवा तपईंको लागि हैन । यसले हाम्रो आमाशयमा रहेको पाचक एंजाइमलाई व्यवस्थित त गर्छ नै यसले भोक लाग्ने क्रियालाई सुस्त बनाइदिन्छ जसले वजन घट्ने हुन्छ ।
यसरी वजन कम भएकाहरूमा कपाल झर्ने र भिटामिनको कमीको समस्या पनि देखिन सक्छ ।
२. रगत नजम्ने समस्या भएमा
हिमोफिलिया भन्ने रगत सम्बन्धित समस्या भएका व्यक्तिले अदुवाको सेवन कम गर्नु पर्दछ । यो त्यस्तो समस्या हो जसमा घाउबाट बग्ने रगत नजम्ने हुन्छ ।
अदुवाले रक्त संचारको गति बढ्ने भएकाले त्यस्तो समस्या भएका व्यक्तिहरूले अदुवा सेवन गरे सामान्य होत लाग्दा पनि बढी रगत बग्ने समस्या देखिन सक्छ ।
गर्भावस्थाको सुरुवाती दिनहरूमा अदुवा सेवनले वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्याहरूमा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । तर यसका अन्तिम दिनहरूमा भने अदुवाले समय पुग्नु अगावै प्रसव पीडा गराएर समय नपुगी बच्चा जन्मिन सक्छ ।
४. मधुमेह र रक्तचापको औषधि सेवन गरिराखेका व्यक्तिहरू
मधुमेह र उच्च रक्तचापको समय भएका व्यक्तिहरूले अदुवाको सेवन नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । यस्ता बिरामीहरूलाई बिटा-ब्लकर, एंटिकोगुल्यान्टस् अर्थात् रगत पातलो पर्ने औषधि या इन्सुलिन जस्ता औषधि दिने गरिन्छ । अदुवासँग मिलेर यस्ता औषधिहरूले हानिकारक असर गर्ने गर्दछन् ।
खानुस् सुकेको अदुवा, शरीर राख्नुस् स्वस्थ
खानासँग सुकेको अदुवा प्रयोग गर्दा मुटुरोग, गाँठो पर्ने, पाचन समस्या, कब्जियत, छेरपटी र खोकी जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । यसबाहेक नून, दही र मही मिसाएर खाँदा पनि स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ।
प्रचण्डको गृहजिल्लामा रेखा थापा राप्रपाको चुनावी कमाण्डर, झापाको जिम्मा विक्रम पाण्डेलाई
क्या”न्सरलाई जितेकी मनीषा कोइरालाले दिइन् क्या”न्सरबाट जोगिने यस्ता टिप्स…